Safal Khabar - दैनिक ५३ लाख घाटा बेहाेरिरहेकाे निगमले २१ जनालाई सित्तैमा जापान उडाउँदै !
दैनिक ५३ लाख घाटा बेहाेरिरहेकाे निगमले २१ जनालाई सित्तैमा जापान उडाउँदै !
शनिबार, १७ फागुन २०७६, ०७ : ४५
काठमाडौँ । दैनिक ५३ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको र ४० अर्बको ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमले सोमबार जापानको नारिताका लागि गर्न लागेको पहिलो उडानमा २१ जनालाई ‘औचित्यविना’ लैजाने भएको छ । उनीहरू सबैको आतेजाते टिकट, भिसा शुल्क, होटल खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता निगमले व्यहोर्ने छ । निगमले यसमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेको छ ।
जापानका लागि उड्ने निगमको वाइडबडी विमानमा १८ वटा बिजनेस, २ सय ५६ इकोनमीसहित २ सय ७४ वटा सिट छन् । यो भ्रमणमा इकोनमी श्रेणीमा राखिएका भ्रमणका सदस्यलाई बिजनेस श्रेणीमै लैजाने भनिएको विमानस्थलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हेर्ने एक अधिकारीले बताए । सोमबार जाने नेपाली टोली बुधबार मात्रै फर्किने छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
#नेपाल वायुसेवा निगम #विमान
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमानखरिदको घोटला प्रकरणमा सुवास नेम्वाङ समेत जोडिन पुगेका छन् ।
न्यारो बडी विमान घोटाला गुपचुप: ६० करोड बढी मूल्य बढाएर जहाज खरिद
नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बडी विमान खरिदमा...
चीनको दुई वायु सेवा प्रदायक कम्पनीका जहाजले...
दुई न्यारोबडी विमान एयरबस ३२० किन्दा कम्पनीको...